Baaris adag ayaa laga hirgalin doonaa Wadooyinka Waaweyn Bayram RayHaber | raillynews
HomeGUUDBaaris adag ayaa lagu dabaqi doonaa Wadooyinka Waaween inta lagu gudajiro Iiddii
23 / 05 / 2020 GUUD, WADADA, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Inta lagu jiro fasaxa, kormeer adag ayaa lagu sameyn doonaa wadooyinka waaweyn
In kasta oo dalka oo dhan laga soo bandhigayo xilligii Ciidul Fitriga, kormeer adag ayaa laga hirgalin doonaa jidadka waaweyn.
Wadarta celceliska celceliska maalinlaha ah ee Booliska iyo Gendarmerie intii lagu jiray Ciidul Fitriga 18 kun 564 shaqaalaha taraafikada ayaa kaqeyb qaadan doona, inta lagu gudajiro fasaxa, booliska iyo gendarmerie 111 kun 384 shaqaalaha ayaa ku jiri doona waajibaadka.
Gaadiidka rakaabka ee dhex mara % 50 hirgelinta awooda ayaa sii socon doonta. Dukumiintiyada ogolaanshaha ee muwaadiniinteena 65 sano iyo wixii ka weyn iyo kuwa la siiyay ogolaanshaha safarka ee xaddiga soo goynta wax soo saarka beeraha waa la hubin doonaa. Codsiga nooca gawaarida moodada wuxuu kusii socon doonaa gobolada taraafikada ay ku urursan yihiin. Macnaha guud Qaybaha 767 Gaadhiga booliiska ee moodalka ah ayaa la dhigay wadooyinka inkasta oo uu jiro bandow laga qabo guud ahaan dalka, kooxaha taraafikada ayaa sii wadi doona xakamaynta wadooyinka inta lagu gudajiro Ramadaanka. Gaar ahaan ciiddan; Iyadoo la raacayo dukumintiga ogolaanshaha safarka, kormeerida ayaa lagu kordhin doonaa wadooyinka si looga hortago shilalka suurta galka ah sababtoo ah xoogga dadka jira 65 sano iyo ka badan asxaabtooda si ay u aadaan halka ay doonayaan, iyo kuwa laga dhaafay bandowga loogu talagalay kuwa taga goosashada beeraha.
Intii lagu jiray Ciidul Fitriga, iskucelceliska booliis celceliska maalinlaha ah iyo gendarmerie ee wadooyinka 18.564 shaqaalaha taraafikada ayaa joogi doona shaqada. Wadarta xilliga fasaxa 59.052 koox taraafikada / koox iyo Booliska iyo Gendarmerie 111 kun 384 shaqaale ah ayaa goob joog noqon doona.
Sidoo kale Wasaaraddayada Tallaabooyinka Rabshadaha Ramadaanka ee Ramadaanka Wuxuu wareegyo u diray 81 maamul goboleedyo. Waxaa lagu sheegay Wareegtada in kastoo ciidda loo qorsheeyay 23 maalmood inta u dhexeysa 26-2020 May 4, tallaabooyinka taraafikada ayaa la dabaqi doonaa 22 maalmood inta u dhexeysa 27-2020 Meey 6.
Kooxo kormeer ah oo loo qoondeeyay Wadooyinka Bartamaha
Si aad u aragto kormeerayaasha isbaarooyinka laga soo galo ee laga soo galo iyo laga baxo gobolada si loo xakameeyo rakaabka rakaabka ah ee gudaha iyo dibada uga dhaca gudaha cabirka tilaabooyinka ay qaadayaan ururada taraafikada si loo hubiyo gaadiid aamin ah oo muwaadiniinteenna leh iyo tillaabooyin looga hortagayo fiditaanka COVID-19;
Booliska 24 ka kooban shaqaale 8 koox,
gendarmerie 40 ka kooban shaqaale 20 kooxda ayaa loo xilsaaray.
Sida fasax kasta, fasaxaani wuxuu diiradda saari doonaa kontaroolada hawada. Macnaha guud 16 by helikabtar ee gobolka 76 Kontoroolka taraafikada waxaa lagu fulin doonaa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'Dronka' ee gobolka.
767 Gawaarida Booliska ah ee Moodada ah ayaa La dhigay Wadooyinka
Codsiga nooca gawaarida moodellada waa la sii wadi doonaa si loo kordhiyo aragtida shaqaalaha taraafikada meelaha xadgudubyada taraafikada iyo shilalka iyo meelaha ay ku badan yihiin taraafikada. 78 (booliiska 767 / gendarmerie 420) oo ku kala yaal 347 degmoGawaarida Model / Moodada Gawaarida Gawaarida waxaa si muuqata loogu dajiyay wadooyinka ay shilalka ku urursan yihiin, oo leh nalka nalka iyo xargaha fekerka.
Dukumentiyada safarka ayaa la hubin doonaa
50% hirgelinta awooda ayaa kusii socon doonta gadiidka rakaabka ee isku xirka. Intaa waxaa sii dheer, waddooyinka, soo goynta wax soo saarka beeraha, iwm, oo ay leeyihiin muwaadiniinta ka weyn 65 sano. Dukumiintiyada oggolaanshaha ee muwaadiniinteenna oo oggolaanshahooda safarka la oggolaaday waa la hubin doonaa. Koontaroolada waa la kordhin doonaa boosteejooyinka iyo xarumaha dhexe, iyo basaska ku-meelgaarka ah iyo gaadiidka burcad-badeedda looma oggolaanayo, marka laga reebo garoomada iyo meelaha la oggol yahay. Dhammaan basaska safarka ayaa la kormeeri doonaa, darawalladooda waxaa lagu ogeysiin doonaa inaysan jabin sharciga, iyo darawalka iyo rakaabka inay xirtaan suumanka kuraasta inta safarka lagu jiro. Iyada oo tixgalineysa shilalka la xiriira basaska, gaar ahaan inta udhaxeysa 02.00-08.00 iyo inta udhaxeysa 05.00-07.00, halkaas oo feejignaanta dareenka ay sabab u tahay hurdo la’aan / daal ayaa dhacay, wadayaasha ayaa lagu casuumayaa gaariga, koontaroolada lama huraanka ah iyo nasasho ayaa la bixin doonaa. Wadooyinka waaweyn ee shaqaalaha taraafikada, laydhka dushiisa waa inuu had iyo jeer joogaa aragtida safka hore, darawallada Khatarta Khatarta ah ee Khatarta Qabashada had iyo jeer waa la sii noolaan doonaa.
Xiriirka waji ka waji waa la dhisi doonaa
Intii lagu guda jiray kormeerka, wadayaasha gawaarida waxaa lagu joojiyay meelaha ay ku yaalaan kooxaha leexashada ku yaal. Waji ka waji isgaarsiinta Waa la dhisi doonaa darawallada ka imanaya jidka dheerna waa la nasan doonaa.
Baadhitaannada radar ayaa la sii wadi doonaa, gaar ahaan marinnada ay shilalka xawaaraha la xiriira ku urursan yihiin. Dhamaanba jidadka isku dhererkoodu dhan yahay 2.155 km Xawaaraha celceliska wuu sii soconayaa la xisaabtanka. Saddexda sano ee la soo dhaafay, tallaabooyin wax-ku-ool ah oo deg deg ah ayaa loo qorsheyn doonaa laguna hirgalin doonaa 3 dariiq oo ku yaal 18 magaalo, halkaasoo shilalka lagu helo inay xoog badan yihiin xilliyada ciidaha.
Xarumaha magaalada, tillaabooyinka taraafikada ayaa lagu kordhin doonaa shahiidnimada, oo ay booqan karaan ehelka shahaadada koowaad ee shahiiday. Meelaha ay shilalka gawaarida lugeynayaan ay aad u daran yihiin, meelaha dadku lugeynayaan, isgoysyada dadka lugeynaya, nidaamyada isgoysyada, gawaarida naafada ah ee hor yaal iyo isgoysyada, kuwaas oo saameyn ku leh amniga lugeeyayaasha, isla markiiba waa laga saarayaa. Baadhitaanno iyo waxqabadyada macluumaadka ee la xiriira mudnaanta / lugeeyaha lugeeyayaasha ayaa sii socon doona iyada oo aan carqalad la sameyn.
Gawaarida qaada shaqaalaha beeraha xilliyada looma ogolaanayo inay u safraan inta u dhexeysa 24.00-06.00. Gawaarida Beeraha ee Beeraha, cagaf cagafyada, isugeynta, iwm. Waa laga hortagi doonaa inay ku daawadaan taraafikada iyagoon qaadan taxadarka lagama maarmaanka ah.
Kooxaha taraafikada ayaa si dhakhso leh loola socon doonaa
Xisaabaadka oo dhan; Hawlaha waxbarasho ee loogu talagalay in lagu wargaliyo isla markaana kor loogu qaado wacyiga ku saabsan badbaadada taraafikada darawalada iyo rakaabka Nasasho Gaaban Nolosha lagu abuuray hal-ku-dhigga Meelaha tunelada waxaa loo isticmaali doonaa si hufan. Ku dabagalka shaqaalaha taraafikada iyo shaqaalaha wadada iyo kormeeradooda isla markiiba Codsiga Raadinta Codsiga (UTP)Waxtarka ayaa la hubin doonaa oo xisaab hubinta laga sameyn doonaa xarunta.
dhexe Qeybta La-talinta Shilalka Gaadiidka xaaladda wadooyinka iyo shilalka dalka oo dhan isla markiiba ayaa lala soconayaa isla markaana waxqabad ayaa la bixin doonaa.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah kormeerka si loo hubiyo jawi nabadgelyo leh oo taraafiko 34.218 Ku socota kormeeraha guud ee taraafikada sharafta leh Waan guriga joogaa laakiin xeerarka taraafikada ayaa maskaxdayda ku jira. Kormeeradeena qiimaha leh, xad-gudub kasta oo aad hesho wuxuu badbaadiyaa nolol. Waxaan kaaga mahadcelineynaa doorka aad ka geysatay badbaadada taraafikada waxaan kuu rajeyneynaa fasax wanaagsan. Sanadwalba wuu fiicnaadaa Gaadiidka SMS leh waxa ku jira ayaa la soo diri doonaa.
Natiijooyinka baadhitaannada jidadka ayaa lagu dhawaaqay
Wadooyinka Waaweyn ayaa nadiif ah sanadka oo dhan Kocaeli
Tareenka Boostada ee Dursunbey, Balikesir
Gawaarida Goobta Badbaadada ee Antalya, Antray, Nashalgic Tram Free
50 Gaadiidka Lacagta La Saaray ee Istanbul
Gaadiidka bilaashka ah ee Antalya
Red Bus, Antray iyo Nostalgia Tram Free Free the Festival
Biriijka bilaashka ah, wadada weyn iyo gaadiidka dadweynaha oo dhan inta lagu jiro iidada
Wadooyinka waawayn iyo Bosphorus bilaash ah inta lagu jiro fasaxyada
Gaadiidka Dadwaynaha ee Manisa
Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa 50 Lacag Lacageed
Gaadiidka Dad-weynaha ee Bilaashka ah
Basaska Degmada iyo Tram Free
Gaadiidka dadwaynuhu wuxuu noqon doonaa mid bilaash ah inta lagu jiro Bayram inta lagu jiro Eskisehir
Gaadiidka rakaabka ee magaalada gudaheeda
shaqaalaha beeraha xilliyeed
Moodada Gawaarida Gawaarida
Ku xadgudubka Gaadiidka
La-talin Shilalka Gaadiidka
Goorma ayaa Masaajidda la furi doonaa? Goorma ayaa Cibaadada laga bilaabayaa Masaajidda iyo Masjidka?
Zynga Wuxuu Qaatay Shirkadda Khamaarka ee Turkiga!
Gaadiidka Dadweynaha ee Bayram ee Mersin oo bilaash ah
Gaadiidku waa bilaash inta lagu jiro fasaxyada Ankara
Dhammaan gaadiidka dadweynaha ee la xidhiidha IMM Bilaash ah